Puntlandtimes (Boosaaso)-Qaar kamid ah culimaa’udiinka Puntland ayaa maanta si adag uga hadlay weerarkii Alshabaab xalay ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho & dhaawac.
Sheekh Mukhtaar Axmed Faarax oo kamid ah culimada Garoowe ayaa maanta salaaddii Jumcada kadib waxa uu ka hadlay wixii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso, wuxuuna dhaliilo ujeediyey xukuumadda Puntland inkasto uu si debecsan ula hadlay Alshabaab.
Soo baara inuu ku jiray kuwii 1993 burco laga soo hubeeyey kabacdina dadkooda iyo Deegaan kooda ku soo hogaamiyey Hassan Daahir aweys haday ku cadaato inuu ku waas ku jiray ii keena miishaar baan madaxa oga jarayaa isagoo nool oo naftu ku jirto sidii neef la gowracayo madaxiisana TABEELE baan surayaa. Waad u jeedaan 1993-2021 in la xakeyn la’yahay dadkaan diinteena suuban shaatiga shaydaan ka u geshtay ee sixran laguna soo hogaamiyo dhul keena puntland. Fadlan soo LIST gareeya dadkii ku jiray Waxaan diinteena suuban ku cayaaraya aan unuunka miishaar oga jaree si kale bal idin ku keena shaatigan shaydaan ka waa in laxakeeyaa waxaan SIXIR kaweyne markan waa miishaar iyakoo nool unuunka looga kirkaro TABEELE yaal la suro ka bacdina dhagax wajiga looga sii dhufto.
Wadaad xume oo dhan waa in qoorta laga bireeyaa,
Wadadka magacisa lagu shegay sheikh Muqtaar Axmed Farax oo ka hadlay magalada Garoowe,waxuu ka hadlay waxusan shaqo kulahan,in loga haro ma’ah waxa ku kalifay in oo galo shekoyin uusan shaqo kulahan oo aan shaqadisa ahan ayuu ku kacay ninkan in labaro ayuu mudan yahay,koley madan la’a.
Runsheeg waa Ceeb sheeg says:
Wadadka waxa lagu haystaa waa khalad waxa uu Xukuumada kusheegayna dhamaan waa waxjira hadaan dhaliilsha Xukumada lasheeegin ma alshabab ayaaa la sheegikaraaa Ader Haduu Shabab Wax ka sheego Yaaa Amnigiisa Damanad Qadaya